एनआरएनए यूकेमा उम्मेदवारहरुको भीड, अध्यक्षमा तीन जना (भिडियोसहित) | We Nepali
एनआरएनए यूकेमा उम्मेदवारहरुको भीड, अध्यक्षमा तीन जना (भिडियोसहित)
वीनेपाली | २०७४ भदौ १० गते १६:४५
लन्डन । एनआरएनए यूकेको ९ सेप्टेम्बरमा हुन लागेको सातौं राष्ट्रिय अधिवेशन तथा नयां कार्यसमिति निर्वाचनका लागि शनिबार उम्मेदवार मनोनयनपत्र दर्ता भएको छ । निर्धारित समय बिहान १० देखि ३ बजेसम्म भएपनि करिब एक घण्टा बढि समय दिएर गरिएको उम्मेदवार मनोनयनपत्र दर्ता कार्यक्रममा अध्यक्षका लागि कृष्ण तिमिल्सिना, योगकुमार फगामी र हिराधन राईले नाम दर्ता गराएका छन् । ११५० पाउण्ड महंगो शुल्क तिरेर अध्यक्षका आकांक्षीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
सबै पदमा कुल उम्मेदवारी संख्या ५३ छ । उपाध्यक्षमा ६ जना चाहिनेमा ११, महासचिव ३ जना, उपमहासचिवमा २ जना, सचिव ४ जना, कोषाध्यक्ष तीनजना, सहकोषाध्यक्षमा २ जना र युवा संयोजकमा ४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । महिला संयोजकमा एकजनाको मात्र नाम परेपछि उक्त पदमा लिलादेवी गुरुङ निर्विरोध भएकी छिन् ।
सबैभन्दा पहिले सामाजिक सञ्जालबाट अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका एनआरएनए यूके उपाध्यक्ष दासुराम पाण्डेले भने नाम दर्ता गराएनन् । अध्यक्षको सहमतिका लागि शुक्रबार मध्यरातसम्म आ आफ्नो पक्षबाट भएका भेटघाट र वार्ताले पनि मनोनयन दर्ताअघि सहमति जुटाउन सकेन ।
उपाध्यक्षमा दीपक श्रेष्ठ, ललितकुमार न्यौपाने, राष्ट्रकुमार राई, दयानिधि सापकोटा, शेरबहादुर सुनार, सुशिला राई, पुनम गुरुङ, डा. दिलिप कुमार यादव, प्रेम गाहामगर, डा. प्रेमबहादुर आले र भोलानाथ खनालको उम्मेदवारी परेको छ । महासचिवमा फडिन्द्र भट्टराई, खुशीतावा लिम्बु र राजकुमार त्रिपाठीले उम्मेदवारी दिएका छन् भने उपमहासचिवमा कृष्ण तिवारी र विनय अधिकारीको उम्मेदवारी परेको छ । युवा संयोजकमा बीरेन्द्र श्रेष्ठ, राजन खकुरेल, कुमार थापा र लालबहादुर गुरुङ छन् । त्यसैगरि कोषाध्यक्षमा शालिकराम सापकोटा, सचिन श्रेष्ठ र महेश गिरीको उम्मेदवारी छ ।
सहकोषाध्यक्षमा सुरज पौडेल र गजेन्द्र गुरुङले उम्मेदवारी दिएका छन् । ३ वटा सचिव पदका लागि चार जनाको उम्मेदवारी परेको छ जसमा नारायण गाउंले, सुरज मास्के, सुनिल बाबु खड्का र तारानाथ भण्डारी छन् ।
तीन जना आइसीसी सदस्यका लागि चिरन शर्मा, शान्ति थापा कुंवर, कुमारी गुरुङ, जयप्रकाश गुरुङ र अर्जुन कटुवालले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
९ जना आवश्यक सदस्यमा १५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सदस्यहरुमा कोलेश्वर ढकाल, तिलक भट्टराई, गंगाबहादुर राना, अर्कराज तिमिल्सिना, जितबहादुर रानाभाट, पवन शर्मा, कमल कंडेल, विमला लिम्बु, मनिष खड्का, विष्णु प्रसाद खरेल, परशुराम पाण्डे, होमनाथ पौडेल, डेबिद्र थापा, मुकेश राना र पवन राईको उम्मेदवारी परेको छ ।
निर्वाचन समितिका अनुसार, उम्मेदवारको नामावली उपर दावी विरोध २८ अगष्ट बिहान ११ बजेसम्म तोकिएको छ भने उम्मेदवारी मनोनयन फिर्ता २८ अगष्ट दिउसो एकबजेसम्म गर्न सकिने छ ।
उम्मेदवारी दर्ता गराउने दिन आकांक्षीहरुको बिहानै देखि भीड देखिन्थ्यो । मनोनयन दर्ता प्रक्रियाका क्रममा उपस्थित एनआरएनए युरोप संयोजक कुल आचार्यले उम्मेदवारहरुको मनोनयन उत्साहप्रति खुशी व्यक्त गरे । स्वतस्फूर्त उम्मेदवारी आउनुले संस्थाको महत्व अझ बढेको आभाष भएको उनले बताए ।
निर्वाचन समितिले सभ्य, सालिन, अनुशासित र सौहाद्र वातावरणमा मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भएको जनाएको छ ।